မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: June 2012
Aung San Suu Kyi crowds speak of 'emotional' Oxford return
By Tim BearderBBC News
The honey-coloured stone of Oxford's buildings were bathed in the warm sunshine of an English summer's day as hundreds of people waited to seeaformer student return.
Men with black bowler hats carried ornate gowns while students with their suits and tassels hurried off to their exams.
For Aung San Suu Kyi, an undergraduate in the city in the 1960s, such scenes recallatime long before tumultuous change defined so much of her life.
Graham and Charmaine Lewis were among hundreds of people who greeted Ms Suu Kyi
Returning to Oxford for the first time in 24 years, memories of an era before her battles with Burma's military junta must seem very distant to the 67-year-old pro-democracy campaigner.
Since 1988 Michael Aris, her husband and Oxford professor, has died ofcancer and her two children Alexander and Kim have grown up.
And in the space ofaquarter-of-a-century, she has becomeaheroine to many, with her arrival prompting hundreds of people to turn out to catchaglimpse of her or, forafew, hand her flowers and shake her hand.
Patricia O'Neill, from Oxford, said: "I was so excited, it was unexpectedly emotional.
"She is an incredibly beautiful woman, who I have such admiration and respect for. I was very privileged to see her."
Charmaine Lewis, 46, left Burma in 1988 as the military was closing the schools and universities.
Her family lived in the heart of Rangoon and her brother was killed during the turmoil of the time.
"I was 18 and my parents thought that I should leave the country and come to England to get an education," said Mrs Lewis.
She added Ms Suu Kyi wasa"beacon of hope" for the country.
Mrs Lewis's husband Graham said the campaigner had shownagreat deal of courage in pursuing change in the troubled country.
"Better slow, gentle change than violent revolution," he said.
Exiled politician Kaung Myatt, 45, spent five years in prison in Burma before moving to England where he has lived for the past three years.
Exiled politician Kaung Myatt said he hoped Ms Suu Kyi could bring change
He said: "I'm here to remind her that she needs to win [elections] in 2015.
"It's quite controversial to say, but she needs to be part of the government, without power you can't make change."
Holly Holman, 55, was waiting in the crowd withaletter for the Burmese politician.
She is trying to set upacharity for orphaned children in the country.
"She's amazing, her endurance and sacrifice," said Mrs Holman.
"People out there really love her. She deserves all the recognition w
e can give her."
Her achievements were also not lost on the younger generation.
Jonathan Glyn, 22, and Ro
Former students Jonathan Glyn and Rosa Clarke came to see Ms Suu Kyi
sa Clarke, 23, are both former Oxford students who came to see Ms Suu Kyi.
Mr Glyn said: "It'savisit from someone that's hadahuge impact on the world so it's exciting to see her."
Oxford isacity where the streets are adorned with the statues of figures whose ideas were thought heretical in their time.
Many of them made the ultimate sacrifice for what they believed, today one of its biggest institutions has honoured another one of those inspirational figures who has been prepared to sacrifice so much for her ideals and the people who believe in her
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:08 PM0comments Links to this post
ရိုဟင်ဂျာတို့သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း အောက်ပါလင့်တွင် လက်မှတ်ထိုးဆန္ဒပြုကြပါ။
အင်္ဂလန် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ၍ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တင်လျှင် အချို့ ပြည်နယ် များ တွင် တစ်ပတ်အတွင်း ခွင့်ပြုနေ၏။ မြန်မာစကား တစ်လုံးမျှမတတ်သော ဘင်္ဂါလီများ မြန်မာ့ အမည် ရောင်းစားနေကြ၏။ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အမည်ခံလျှင် UNHCR မှ နေစရာပေး၏၊ စားစရာပေး၏၊ ထောက် ပံ့မှုပေး၏။
ထို အပြင် ပြည်ပမှ မြန်မာ တိုင်းရင်း သား အဖွဲ့ အစည်းအချို့ ကလည်း လူမျိုးတစ်မျိုး ၏ အရေး လုပ်ခြင်း ကို တရားသ ဖြင့်လုပ်ရပ် အဖြစ်ယူဆ၍ ရိုဟင်ဂျာဘက်မှ ရပ်တည်နေ၏။ ရိုဟင်ဂျာနှင့် မြန်မာ ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်း သားတို့သည် မည်သို့မှ နှိုင်းယှဉ်၍ မရကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် လူကြီးများကလည်း မိမိတို့ တိုင်းရင်း သားလူငယ်များကို ပညာပေးဖို့လို၏။ BURMA CAMPAIGN UK မှ နားမလည်သော တိုင်းရင်း သားလူငယ်များ နှင့် မြန်မာလူငယ်များကို လန်ဒန် ရုံးခန်းတွင် လခပေး အလုပ်ခန့်ထား၍ မြှောက်ပေးပြီး ၍ ရိုဟင်ဂျာအရေး တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေ၏။ US CAMPAIGN မှ အောင်ဒင် ကလည်း သူ့ အတွက် လခ စို့စို့ ပို့ပို့ ရသောကြောင့် အမေရိက မှနေ၍ ရိုဟင်ဂျာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေ၏။
မြန်မာပြည်သူများ၏ လက်မှတ်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို တင်ပြမည်ဖြစ်ပါ သဖြင့် လက်မှတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ရရှိရေးလှုံ့ဆော်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၊ ပညာရှင်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများ နှင့်ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊လူမှုရေး အသင်းဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါဝင်သော အစုအဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် နိုင်ငံတော်တွင်းမှီတင်း နေထိုင်လျှက်ရှိကြကုန် သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု၊ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု လွတ်လပ်စွာ မှီတင်းနေထိုင် မှုတို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ ပြည်ပမှ ၀င်ရောက် လာသော ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ) တို့နှင့်ပတ်သက်သော အောက်ဖေါ်ပြပါ ကြေငြာချက် ကိုထုတ်ပြန်သည်။
၁။ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ) လူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်းမူလဘူတ ပြန့်နှံ့ နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုး မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာသည်။
၂။ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ) လူမျိုးတို့အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသော၊ အမှတ်အသားပြုလက်ခံသော UNHCR အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရတို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုး သားရေး ကိစ္စရပ်များ တွင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၃။ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ) လူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ တိုင်းရင်း သားလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ် ကြောင်း ကြိုးပမ်းမှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လူမှုရေး အရထောက်ပံ့ခြင်း၊ မီဒီယာများဖြင့် ထောက်ခံရေးသားခြင်း၊ သံခင်းတမန်ခင်းအရ လက်ခံခြင်း သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ အမျိုးသားရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၅။ မြန်မာပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာရှိမြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ ( NATIONAL COUNCIL UNION OF BURMA) အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအရေး နှင့် တိုင်းရင်း သားလူမျိုး များ၏ အခွင့်အရေး များတောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေသော မြန်မာ တိုင်းရင်း သားတပ်ပေါင်းစုများ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအဖွဲ့ အစည်း များတွင် ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ) လူမျိုးများ အား အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သော်၎င်း၊ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်သော်၎င်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံဖွဲ့စည်းခြင်း မရှိ ကြောင်း သိစေအပ်သည်။
၆။ ပညာရှင်ဟု အမည်ခံ၍ တင်ပြလာသူ နိုင်ငံခြားသား များ၏ စာတန်းများ သည် ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ) တို့၏ ဖန်တီးထားသော ဖြစ်စဉ် အား စူးစမ်းလေ့လာမှု အဆင့်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး။ အကယ်စင်စစ် ထိုပညာရှင်များသည် မြန်မာ ပြည် အကြောင်းကို သော်၎င်း မြန်မာပြည်၏ လူမျိုးများပြန်.နှံ့ နေထိုင်မှုကိုသော်၎င်း ရေရာစွာသိရှိသူ များမဟုတ်ကြောင်း ကြေငြာသည်။
၇။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများသည် အိန္နိယမှ အလုပ်သမား များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ကိုယ်တိုင်သွင်းယူခဲ့၍ ၎င်း အိန္နိယ နှင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် မြန်မာ တိုင်းရင်း သား များ မည်သို့မျှ မဟုတ်ခဲ့သည်ကို သမိုင်းစဉ်နှင့် ချီ၍ သေချာစွာသိရှိခဲ့သော်လည်း။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံအပါအ၀င် ၎င်း အင်္ဂလိပ် မျိုးနွယ်စု နိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျှ နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ခေါ်ယူလာ ခဲ့သော နိုင်ငံခြားသားများအား မြန်မာတို့၏ တိုင်းရင်း သားအဖြစ် ကျောထောက် နောက်ခံပေး နေခြင်းအား ကန့်ကွက်ကြောင်း သိစေအပ်သည်။
၈။ လူကုန်ကူးသူများနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများတွင် အခြေချနေထိုင်လိုသူများ ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရည်မှန်း ချက်များဖြင့် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူ ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ) များအား ဖေါ်ထုတ်တင်ပြသွားမည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:55 AM0comments Links to this post
အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံနိုင်သော်လည်း အကြမ်းဖက်သူများကိုတော့ ထိုအလုပ်ကို မလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစရာမလိုပေ။
NLD သည် အကြမ်းဖက်သမားများကိုတောင်းပန်သော ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ ပထမဦးဆုံးသော ပါတီဖြစ်လာဖို့ရှိ၏။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:29 AM0comments Links to this post
Aung San Suu Kyi crowds speak of 'emotional' Oxfor...